Certificate in Lean Manufacturing Technology | Eliademy
Certificate in Lean Manufacturing Technology
BEng, MIET, MIAEng, LLB, CLSSMBB
Mr.Zeyar Than Win receivedabachelor's degree in Engineering from University of Sunderland in 2009, bachelor's degree in Law and Legislation from Yangon University of Distance Education in 2011. He isaCertified Lean Six Sigma Master Black Belt from Aveta Business Institute, Six Sigma Council as well as International Association for Six Sigma Certification. He isaprofession member of British Royal Chartered Institution of Engineering & Technology and award the title of MIET in 2015. MIET isaregulated professional title in UK and Europe.
ဤသင်တန်းသည် Lean Philosophy နှင့် ၄င်း၏ အလုပ်လုပ်ထုံး၊ လုပ်နည်းတစ်ခုဖြစ်သည့် Just-In-Time Methodology အသုံးပြုပြီး၊ ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ ၏ ကြီးပွားတိုးတက်စေရန် လုပ်ဆောင်သည့် စီမံခန့်ခွဲမှုနည်းနာများကို သင်ကြားမည့် သင်တန်းဖြစ်ပါသည်။
သင်ကြားချိန် နာရီ ၃၀
သင်ကြားမှု ဗွီံဒီယိုပောင်း ၈၀ ကျော် နှင့်
စာမေးပွဲနှင့် ဥာဏ်စမ်းမေးခွန်းများကို ဖြေဆိုရပာမည်။
ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသော၊ အလုပ်လုပ်ကိုင်လိုသော မန်နေဂျာများ၊ အင်ဂျင်နီယာနှင့် အခြားဘွဲ့များ အပြင် ကိုယ်ပိုင်၊ လုပ်ငန်းရှင်များပါ သင်ယူလေ့လာသင့်သည့် သင်တန်းဖြစ်ပါသည်။ မကြာမီသော ကာလတွင် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ လာရောက်ရင်နှီးမြှပ်နှံမည့် အမေရိကန် ကုမ္ပဏီများ၊ ဂျပန်ကားထုတ်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီများ နှင့် အခြားသောနိုင်ငံများမှ လာရောက်ရင်းနှီးမြှပ်နှံမည့် ကုမ္ပဏီများတွင် လစာ ကောင်းကောင်းနှင့် လုပ်ကိုင်လိုပါက သင်ယူလေ့လာထားသင့်သော သင်တန်းဖြစ်ပါသည်။
ဗွီဒီယိုဖိုင်များနှင့်၎င်း၊ Power Point Slide ဖြင့်၎င်း၊ ဖတ်စာအုပ်နှင့် ဖတ်ရှုလေ့လာရန် စာရွတ်စာတမ်းများ ပေးကမ်းခြင်းဖြင့် သင်ကြားမည့် အပြင် စာသင်သား အနေဖြင့် တပတ်လျှင် အနည်းဆုံး ၂ နာရီမျှ သင်ကြားသူနှင့် လာရောက်တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။
Nigel Slack, Stuart Chambers, Robert Johnson. Operations Management 5th Ed Prentice Hall ISBN-10: 140584700X
ဖတ်စာအုပ်မရှိသူများ၊ ကျွန်တော့်ဆီတွင် E-Book ကိုတောင်းယူ ဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်ပါသည်။
@ Copyright Zeyar Than Win. All rights reserved.